एक फोनको भरमा डाक्टर बिरामीको घरमै पुग्छन् : बास्तोला - खवर संजाल
एक फोनको भरमा डाक्टर बिरामीको घरमै पुग्छन् : बास्तोला
- जेष्ठ ८, २०७८ मा प्रकाशित
विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड १९ को महामारीबाट सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका पनि अछुतो छैन । गाउँपालिका भित्र संक्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा हामीले नेचासल्यान गाउँपालिकाका अध्यक्ष डुफ कुमार बास्तोलासँग कुराकानी गरेका छाँै । प्रस्तुत छ खबर संजालसँग अध्यक्ष बास्तोलाको कुराकानी :
विश्वव्यापी फैलिरहेको कोभिड १९ को महामारीलाई नेचासल्यान गाउपालिकाले कसरी लिएको छ ?
हाल यो महामारीसँग संसार नै जुधिरहेको छ, हाम्रो गाउँपालिका पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । यसलाई जसरी पनि नियन्त्रण गर्नेगरी हामी लागिरहेका छौँ, यसबाट हाम्रो गाउँपालिकाभित्रपनि जनस्वास्थ्यमा मात्र नभई गाउँपालिकाले गर्ने थुप्रै कामहरुमा अप्ठ्यारो स्थिती सृजना भएको छ, अरु सबै काम छोडेर यो महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपरेको छ, सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो यसको नियन्त्रण गरेर हामी आफ्नो नियमित गतिमा फर्किनेगरी काम गरिरहेका छौँ ।
गाउँपालिकाभित्र संक्रमितहरुको अवस्था कस्तो छ ?
हिजोसम्मको तथ्यांक अनुसार हाम्रो गाउँपालिकाभरीमा ४८ जना संक्रमित हुनुहुन्छ । उहाँहरुमध्ये २ जनालाई तुलनात्मक रुपले अलि धेरै स्वास्थ्यमा समस्या छ भने अरु लगभग सामान्य अवस्थामै हुनुहुन्छ । अलि धेरै समस्या भएका दूईजनालाई घरमै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर राखेर स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राखेका छौँ । अहिलेसम्म गाउँपालिकाभित्रका सबै संक्रमितहरु होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ । हाम्रो गाउँपालिकाको कुरा गर्ने हो भने यहाँ तीन तरिकाबाट संक्रमण भित्रिएको हामीले बुझेका छौँ । एउटा काठमाण्डौतिर गएर आएका मध्ये केहीमा संक्रमण देखिएको छ, अर्को जिल्ला सदरमुकाम तिर गईरहने मान्छेहरु मध्येमा केहीमा संक्रमण देखिएको छ, अर्को ठुलो संख्यामा संक्रमितहरु देखिएको भनेको चाहिँ विभिन्न समारोह, विवाह आदिमा सहभागी भएकाहरु मध्येबाट छन् । हामीले यी सबैको पहिचान गरेर संक्रमण फैलिन नदिनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु चाल्न शुरु गरिसकेका छौँ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्ने थप तयारी के छ ?
गत सालमा फैलिएको महामारीले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ । हामीले सबैलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पुरा गर्न अनुरोध गरेका छौँ । बाहिरबाट मान्छे आउन नदिने, अत्यावश्यक बाहेकका काममा घरबाट ननिस्किन अनुरोध गरेका छौँ । लक्षण देखिनेहरुलाई होम आइसोलेसनमा राख्ने, लक्षण अनुसारका औषधीहरु दिने, संक्रमितहरुलाई गुर्जो लगायतका आयुर्वेदिक औषधीहरु र अन्य औषधीका सेट वितरण गर्ने काम गरेका छौँ । मास्क, सेनिटाइजर, साबुन लगायतका सामग्रीहरु वितरण गरेका छौँ । समय समयमा अक्सिमिटरको सहायताबाट अक्सिजन लेवल जाँच गरिरहेका छौँ । हामीसँग बर्थिङ सेन्टरमा भएका ३ वटा समेत गरी १५ वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर तयारी अवस्थामा छन् । १० वटा अक्सिजन सिलिण्डर तयारी अवस्थामा छन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि हामी तयार नै छौँ । बिरामीहरुलाई बाहिर लैजानपरेको खण्डमा गाउँपालिकाको गाडी र अरु पनि केही गाडीहरु तयारी अवस्थामा छन् । विरामीहरुलाई स्वास्थ केन्द्र नआई घरैबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई फोन गर्ने र घरमै गएर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । यसले गर्दा रोग फैलिन पाउँदैन । यसकारण पनि हामी यसलाई नियन्त्रण गर्न सफल हुनेछौँ ।
गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह कसरी भईरहेको छ ?
हामी अहिले गाउँपालिकाको सामान्य सेवाप्रवाहमा केन्द्रित छैनौँ । अत्यावस्यक भन्दा बाहेकका सेवा हामीले प्रवाह गरेका छैनौँ । बजार, विद्यालय आदि ठप्प छन् । उद्योग बाण्ज्यि महासंघले सबै पसलहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवामै हामी केन्द्रित छौँ ।
विगतमा जस्तो यसपाली राहत वितरणको कार्यक्रम के छ ?
यसपाली हाम्रो राहत वितरण गर्ने कुनै योजना छैन । गत साल देश भर थुप्रो ठाउँमा राहत वितरण भयो, हामीले पनि गर्यौं । यसपालि हामी स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या हुन नदिने कुरामै बढी केन्द्रित भएका छौँ । आवश्यकता महशुस भएको खण्डमा गाउँपालिकाले जसलाई पनि सहयोग गर्छ । काम गर्न नपाएर कोही समस्यामा परेको छ भने त्यसको पहिचान गरेर नजिकको सरकार भएको नाताले गाउँपालिकाले उसलाई सबैखाले सहयोग गर्छ तर प्याकेज नै ल्याएर राहत वितरण गर्ने हाम्रो योजना छैन ।
अन्तिममा नेचासल्यानबासी सबैमा के शन्देश प्रवाह गर्न चाहानुहुन्छ ?
अझै पनि कहिँकहिँ खेलमैदानहरुमा स्थानिय अझ विशेषगरी युवाहरु उपस्थित भएर खेल खेल्ने गरेको सुनिन्छ, कहीँ कहीँ समाजिक दुरी कायम नभएको हो कि? भन्ने गुनासाहरु आएका छन् । चउर हरुमा, पार्कहरुमा स्वच्छ हावा लिन जाने नाममा एकजना, दुईजना गर्दै धेरै मान्छेहरु जम्मा हुने जस्ता गुनासाहरु आईरहेका छन्, कृपया यसरी गाउँपालिकाको अनुरोध उल्लंघन नगर्नका लागि अनुरोध गर्दछु । सबैसँग दुरी कायम गर्न, अप्ठ्यारो पर्नेवित्तिकै हामीलाई सहयोग गर्न पनि अनुरोध छ । हामी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । ठिकै देखिएको मान्छे वास्तवमै ठिक नहुन पनि सक्छ यसकारण कोहीसँग पनि भौतिक रुपमा नजिक नहुन र स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पुरा गर्न अनुरोध गर्न चाहान्छु ।